Inona avy ireo tombony sy ROI amin'ny Search Engine Optimization? | Martech Zone
Asabotsy 25 Febroary 2017 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Raha nandinika ireo lahatsoratra taloha nosoratako tamin'ny fanatsarana ny motera fikarohana aho; Hitako fa efa folo taona mahery izao no nanomezako lalana. Ny fanatsarana ny motera fikarohana dia nisondrotra tamin'ny tampony taona vitsy lasa izay, indostrialy miliara marobe izay nisondrotra nefa avy eo nianjera avy tamin'ny fahasoavana. Raha eny rehetra eny ny mpanolo-tsaina SEO, maro no nitarika ny mpanjifany hidina amin'ny lalana mampiahiahy izay nilalaovany ny motera fikarohana fa tsy ny fampiasana azy io amin'ny fomba mandaitra.
Izaho aza nanoratra ilay lahatsoratra mahazatra, cliché, izany SEO dia maty mampihoron-koditra ireo ao amin'ny orinasako. Tsy hoe nieritreritra aho fa maty ny motera fikarohana, fa nitohy nitombo ny fifandraisany sy ny fiantraikan'ny paikadim-barotra nomerika eo amin'ny orinasa. Maty io indostria io satria very lalana. Tsy nifantoka tamin'ny marketing intsony izy ireo fa kosa nifantoka tamin'ny algorithma ary nanandrana namitaka ny lalana mankany an-tampony.
Isan'andro aho dia mahazo fangatahana mangataka, mangataka, na te handoa backlinks aza. Mahagaga satria mampiseho ny tsy fanajana tanteraka ny fiarahamonina niasako mba hananganana lanja sy fifampatokisana tato anatin'ny folo taona lasa. Tsy hataoko tandindomin-doza izany na iza na iza.
Tsy midika izany fa mbola tsy mampaninona ahy ny mitazona ny tranokalako ho voatsonga ho an'ny motera fikarohana na an'ireo an'ny mpanjifako. Search engine optimization dia mitohy ho fototry ny ezaka rehetra ataontsika amin'ny mpanjifanay, na lehibe na kely.
Harris Myers dia namolavola ity sary ity, SEO: Maninona ny orinasanao no mila an'izao?, ao anatin'izany ny enina antony tokony hisian'ny tetik'asa tsirairay ny tetika fikarohana biolojika.
Tombontsoa azo avy amin'ny SEO
Ny traikefa an-tserasera dia manomboka amin'ny fikarohana - 93% ny mpanjifa ankehitriny no mampiasa motera fikarohana hitadiavana vokatra sy serivisy
SEO dia mandany vola be - 82% amin'ireo mpivarotra no mahita ny SEO lasa mahomby kokoa, miaraka amin'ny 42% mahita fiakarana lehibe
SEO dia mamokatra fifamoivoizana avo sy tahan'ny fiovam-po avo - Olona 3 lavitrisa mitady Internet isanandro sy isan'andro miaraka amin'ny teny lakile izay mitondra fikarohana tena misy tanjona.
SEO no fanao amin'ny fifaninanana ankehitriny - Ny filaharana dia tsy mari-pamantarana fotsiny ny fahaizan'ny SEO comapny fa mari-pamantarana ny fahefan'ny comapny anao ao anatin'ny indostranao.
SEO dia miompana amin'ny tsenan'ny finday - 50% amin'ny fikarohana finday eo an-toerana no mitarika fitsidihana fivarotana iray
Ny SEO dia miova hatrany ary toy izany koa ny fotoana mety ananany - Ny motera fikarohana dia manatsara hatrany ny algorithman'izy ireo ary manokana sy manamboatra ny valiny mba hampitomboana ny traikefan'ny mpanjifa. Tsy zavatra anao ny SEO do, mitaky fahitana mitohy ny fanaraha-maso ny fiovan'ny motera fikarohana sy ny fiezahana avy amin'ireo mpampita hafatrao.
ROI an'ny SEO
Ny zavatra tadidio voalohany momba ny fiverenan'ny fampiasam-bola ho an'ny SEO dia ny hiovaova rehefa mandeha ny fotoana. Raha manohy manatsara sy mamokatra atiny mahavariana ianao dia hitombo ny fiverenan'ny fampiasam-bola rehefa mandeha ny fotoana. Ohatra, mamokatra infographic ianao amin'ny fotoana ifaninanana ary ny fampiasam-bola dia $ 10,000 amin'ny fikarohana, famolavolana ary fampiroboroboana. Amin'ny volana voalohany dia manatanteraka ny fampielezan-kevitra ianao ary mahazo fitarihana vitsivitsy ary angamba fiovam-po iray aza miaraka amin'ny sandan'ny tombony $ 1,000. Ny ROI anao dia nivadika ambony ambany.
Saingy ny fanentanana dia mbola tsy nahatratra ny valiny farany azony. Tamin'ny volana faharoa sy telo dia natsangana tamin'ny tranokala manam-pahefana marobe ny infographic ary navoaka ho an'ny mpivady. Ny trosa vokatr'izany dia mampitombo ny fahefan'ny tranonkalanao amin'ity lohahevitra ity ary manomboka mitana ny laharam-pahamehana amin'ny teny lakile am-polony maro ianao mandritra ny volana vitsivitsy. Ireo pejy na lahatsoratra na lahatsoratra misy ifandraisany dia manomboka mahazo fitarihana an-jatony miaraka amina famaranana am-polony isam-bolana. Mahita ROI tsara ianao izao. Io ROI io dia mety hitohy hitombo mandritra ny roa taona manaraka.
Manana infographic iray ho an'ny mpanjifa iray izay manohy manintona fito taona taorian'ny namoahana azy voalohany! Tsy lazaina intsony fa nampiasainay ny atiny ho an'ny antoka varotra sy hetsika hafa. Ny ROI amin'ity sary ity dia an'arivony maro izao!
Tags: tombony azo avy amin'ny seofikarohana biolojikafilaharan'ny fikarohana organikaSEOtombony seoserp